साप्ताहिक संवाददाता , असार ८, २०७६
गाँजाको विषयमा तनाव उत्पन्न भैरहेको छ । विभिन्न सांसदले यो कुरालाई पहिल्यैदेखि उठान गर्दै आएका छन् । हालै गायिका तथा सांसद कोमल वलीले पनि उक्त कुरा उठान गरेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
रामजी ज्ञवाली, असार ८, २०७६
‘परिवर्तन अपरिहार्य छ, यो सम्भव पनि छ । त्यो पनि हाम्रै जीवनकालमा ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको पार्टि ‘नयाँ शक्ती नेपाल’ को घोषणा सभापछि कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘डा. भट्टराईको भिजन र सपना मलाई राम्रोसँग चित्त बुझ्यो, सोहि कारण नयाँ शक्तीमा आबद्ध भएँकी हुँ ।’ करिश्मालाई यति कुराले मात्रै राजनितीमा सक्रिय हुन कहाँ मन लागेको हो र ? कलाकारिताले मात्रै नेपालको मुहार फेर्न गाह्रो भो, उनले भनिन्, ‘यसका लागी उत्तम बाटो राजनिती हुन सक्छ, सोहि कारण राजनितीमा लागेकी हुँ ।’ पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, असार ८, २०७६
हामी उठ्ने छौँ अभियानलाई हङकङबाट एकलाख रुपैयाँ सहयोग रकम प्रदान भएको छ । खेलकुदको क्षेक्रमा लामो समयदेखि त्रियाशिल संस्था हङकङ नेप्लिज तेक्वान्डो एसोसियसनले उक्त रकम प्रदान गरेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
गीतकार डा. डीआर उपाध्यायलाई ‘वर्ष गीत पुरस्कार’बाट पुरस्कृति गरिएको छ । गीतकार सङ्ग नेपालले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने ‘वर्ष गीत पुरस्कर’ यो बर्ष ‘सन्तानको शिर उठाउन हजार ठाउँ शिर झुकाउने बाबालाई बिर्सिएर’ गीतका लागि यो वर्ष उपाध्यायलाई पुरस्कृत गरिएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
असारमा पनि भुइँकुहिरोका कारण त्यहाँको परिवेश चिसो थियो । भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र घोरेटार हतुवागढीस्थित फलामढुंगाको चिसो मौसमलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका गीत, नृत्य तथा साहित्यिक जमघटले खुबै तताए । पुरा पढ्नुहोस्
बालविकास एन.सी.मासले अक्षर मनोविज्ञानको अध्ययन तथा अनुसन्धानले विद्यार्थीहरूमा रहेको सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषतालाई बाहिर ल्याउन ठूलो टेवा पुग्ने कुरा बताएको छ । गत शनिबार ‘राष्ट्रिय स्तरको हस्तलेखन प्रतियोगिता–२०७६ का विजेताहरूलाई पुरस्कार वितरण’ कार्यक्रममा एन.सि.मासले ऊक्त धारणा व्यत्त गरेको हो । पुरा पढ्नुहोस्